"Fluid Mask 3" iyo "DefenseVPN", waa laba barnaamij oo qiimo sare leh qiimo aad u jaban | Waxaan ka socdaa mac
«Maaskarada Dareeraha 3» iyo «DifaacaVPN», laba barnaamij oo heer sare ah oo qiimo aad u jaban leh
Waxaan ku bilaabeynaa usbuuc cusub dalabyo cusub iyo dalacsiin codsiyada aad uga faa iideysan karto sida ugu badan maahan oo keliya Mac-gaaga, laakiin sidoo kale hal-abuurkaaga, xaqiiqduna waxay tahay in maanta oo Isniin ah soo-jeedintu waa laba-laab, oo aad uga duwan.
Dhinac ayaan ka haynaa "Maaskaro dareere ah 3", qalab si gaar ah loogu fikiray naqshadeeyayaasha garaafyada, sawir qaadayaasha, iwm; dhanka kale waxaan leenahay "DifaacaVPN", barnaamij aad iskaga ilaalin kartid xayiraadaha-geedi socodka adiga oo ilaalinaya asturnaantaada iyo macluumaadkaaga cid saddexaad,
1 Maaskaro dareere ah 3
Maaskaro dareere ah 3
"Dheecaanka dareeraha 3" waa aalad farsamo-tafatirka muuqaalka ah ee Mac oo kuu saamaxaysa inaad ku shaqeysid lakab ama, halkii, ka dhigaysa hawsha jar oo isku dar walxo kala duwan sawirada kala duwan hal sawir ah.
Waa barnaamij tayo sare leh oo, sida ay sheegeen soosaarayaasheeda, ay u adeegsadaan shirkadaha abuurka sharafta leh sida BBC, Disney, Hallmark, ESPN, NBC iyo kuwa kale. "Maaskaro dareere ah 3" wuxuu fududeeyaa isdhexgalka bilaa sawirada ah iyadoo la jaro mid ka mid ah loona dul mariyo asalka dadka kale. Waxay leedahay "habraac qarsoodi ah oo u gaar ah" taas oo ay ugu wacan tahay xulashada qaybaha aad rabto inaad hayso "mid aad u fudud", xitaa marka aad hesho faahfaahin u baahan sida saxda ah ee maqaarka ama timaha.
«Fluid Mask 3» wuxuu u shaqeeyaa si uu u qabto goynta saxda ah labada shay sida xoolaha, dadka iyo meelaha. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a noocyo badan oo burush ah si aad u rinjiyeyn karto oo aad ugu sawiri karto maaskaro. Astaamaha kale ee muuqda waa:
Si fudud u hel geesaha sawirkaaga, oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u kala soocdo xagga hore iyo gadaasha.
Aqoonsi maaskaro midab super ganaax.
Fududeeyaa Go'doomi meelaha adag oo codso goobaha barta, isku darka raadinta gees fara badan iyo farsamooyinka isku dhafka isla sawirka
Waxaad awoodi doontaa inaad keydiso isku xirnaanta goobta shaqada mar dambe shaqeyso.
Waxay ku habboon tahay processing Dufcaddii.
Waxay bixisaa xakamaynta isdhexgalka isticmaale buuxa oo leh dejimaha midabaynta.
Marka la soo koobo, "Fluid Mask 3" ayaa leh astaamaha dhagaha oo ah aalad ku habboon dhammaan adeegsadayaasha si xirfadaysan ula shaqeeya sawirrada una baahan codsi bixiya heer sare oo sax ah.
Qiimaheeda caadiga ah waa $ 99, hase yeeshe hadda waxaad kaheli kartaa inaad ka faa'iideysato qiimo dhimis dhan 74% kaliya $ 24,99 Halkan, mahadsanid dhiirrigelinta gaarka ah ee ololaha "Laba Dollar Talaadada". Si kastaba ha noqotee, waa inaad yara deg degtaa maxaa yeelay dalabku wuxuu dhammaanayaa saqbadhkan. Xusuusnow in si loo isticmaalo "Fluid Mask 3" aad u baahan tahay Mac leh OS X 10.4.11 ama ka sareysa nidaamka qalliinka.
Laga soo bilaabo wax hal abuur leh sida naqshadeynta iyo qaabeynta sawirka, waxaan u boodnay wax aad u badan oo shaqeynaya oo ansax u ah ficil ahaan nooc kasta oo adeegsade ah. Kani waa "DifaacaVPN", waa qalab naga caawin kara badbaado dareemo adduunkan dhijitaalka ah ee maalin walba ku soo biiraya waxaan ka warqabnaa ceebaha amniga ee cusub, jabsiga iyo waxyaabo kale oo badan.
"DifaacaVPN" waa koronto bixiye daryeela qari cinwaankaaga IP-gaaga iyo meesha aad ku sugan tahay si ay ugu dhowaad aan macquul u ahayn in dhinacyada saddexaad u ogaadaan halka aad joogto. Iyo dabcan, sidoo kale waxaad kuxirankartaa shabakada meelkasta oo aad aduunka kajoogto sidaas awgeedna looga fogaanayo xaddidaadda waxyaabaha ku jira dhulka kuwaas oo ku badan adeegyada sida Netflix, iyo kuwa kale oo badan.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee "DifaacaVPN" waxaa ka mid ah:
Tikniyoolajiyad sir ah oo laba-geesood ah oo amniga kordhinaya.
Daawasho deg deg ah iyo qulqulka shabakada 1 Gbps.
Qalab fudud oo aan diiwaangelin loo baahnayn.
U beddel si dhakhso leh u xidho isku xidhka shabakaddaada haddii isku xidhka VPN hoos u dhaco.
Hada mid waad heli kartaa rukumanka nolosha oo dhan «DifaacaVPN» sidaas darteed kaliya $ 39,99, oo ah qiime dhimis lagu qiyaasay 94% marka loo eego in ka badan toddobo boqol oo doolar oo ay ku kici karto. Dalabku wuxuu ku egyahay toddobo maalmood waana heli kartaa Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » «Maaskarada Dareeraha 3» iyo «DifaacaVPN», laba barnaamij oo heer sare ah oo qiimo aad u jaban leh
Aaladda cusub ee Amazon Fire TV 4k waxay taageertaa PIP waxayna kuu oggolaaneysaa inaad barnaamijyo duubto
Firefox waxay kudareysaa horumarin cusub biraawsarkooda Mac